VaSadhusi uye Ngano - Rabbi Michael Avraham
Responsa > Category: Kutenda > VaSadhusi nengano
Mhoro Joseph Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Pfungwa dzavo dzakavaita kuti vasabvume mirairo yevachenjeri uye kuti varambe Toshav'a kusvika pamwero wakati [vasinganyatsozivi kuti chii chaizvo chaivapo]
Nheyo yakavatungamirira haisiyo here inokutungamirirai?
Murairo wevaFarise pamusoro pevaSadhusi ndeimwe mhosho huru yekunzwisisa kwako here?
Uye sei uchibatwa chibharo paTalmud [nekuda kwechimwe chikonzero, chandisina kukwanisa kumira kusvika zvino]
Sei pfungwa dzakajairika dzichitiudza kuti hapana dambudziko kubatidza air conditioner neMugovera, kana kufashaira mvura yekofi
Kupesana pamberi peTalmud uye vanopikisa, ndinonzwa rudzi rwe "chamupupuri" mune izvo zviri hongu uye izvo zvisiri, uye chii chikonzero chekusiyana.
Tariro ndakazvitsanangura ndimene, nokuti ndinonyara chaizvoizvo nezvandakaratidzirwa muzvinyorwa zvenyu
mikyab Vashandi Akapindura 2 years ago
Kana musimboti wakavatungamirira ndiwo unonditungamirira saka ndiri Sadhusi naBeitusi. Kana uine mubvunzo chaiwo, ndokumbira uugadzirire pano uye kurukura nezvawo zvakadzama.
Mhoro Joseph Akapindura makore 2 apfuura
handina kuti muri muSadhusi.
1. Ndakataura kuti kusvikira kuzuva rino kwaizoratidzika kwandiri kuti nzira yakadaro inzira yavaSadhuse, kushaikwa kwokugamuchirwa kwemirangariro/mitemo/chiremera chinopfuudzwa kubva kuchizvarwa kuenda kune chimwe chizvarwa netsika dzeTorah pasina ufakazi hupi nohupi [ rudzi rwezvakataurwa naHillel kuna Ger uyo aida kudzidza Mashiripiti]
2. Zvinoratidzika kwandiri kuti uri Orthodox mupfungwa ye halakhic, nezvimwe zvakadaro
Uye kuti tingacheka sei nebanga rinopinza chii chatinofanira kugamuchira mutsika uye chii kwete
Muchidimbu, nzira yamunocheka nayo chiremera chekutanga mutsika, saka vaSadhusi vanocheka vaFarisi mutsika.
Uye tinoziva sei kuti vaFarisi vaitaura chokwadi?
Tine humbowo hwekururama kwevaFarisi here kana kuti tinongobhejera?
ק Akapindura makore 2 apfuura
Kamilta Debdihuta anofanira kugadzirisa Wikipedia yako uye anoti unopupura kuti unogona kunge uri muSadhusi neBeitusi.
AP aiita nharo panguva iyoyo nemumwe murabhi nezvaRabhi Shlita, uye ndinofunga akandipokana kuti chero iwe uchiti hapana chiremera panyaya dzepfungwa kudzinza rezvizvarwa, saka kunyangwe wasvika kune vese. mitemo gumi nenhatu iwe pachako hapana mairi. Nekuti chikamu chakakura chepfungwa yemisimboti gumi nematatu itsika. Uye nzwisisa kuti vamwe havana kungwara kupfuura ini…
Ini handikurukure zvachose kana tsika kana rabhi, handisi mushishi kugovera mamakisi, ndakabatikana nematsanangudzo.
Ndinoedza kunzwisisa musiyano [kana uripo] pakati pematauriro ake nematauriro evaSadhusi [kukushaya ruzivo rwandinarwo pamusoro pavo zvachose]
Chimwe chinhu chiri kuwana chokwadi uye chikamu chekufambiswa kweTorah kwezvizvarwa pakati pevane tsika dzeTorah [uye isu hatisi kubata nesainzi chokwadi] chinondisungirira, kana kwete, pane "yakarongeka" chiremera chakaitwa na tsika dzeTora kumarudzi ose
Ndinoshamisika kuti ndingagamuchira sei chaizvoizvo kunyange Torah yakanyorwa, sezvo yakapiwawo naavo vandisingagamuchiri chiremera chavo
mikyab Vashandi	Akapindura makore 2 apfuura
Handina kuti wati ndiri muSadhusi. Zvandataura ndezvekuti gakava rekuti ndiri muSadhusi kana kuti kwete harina basa kwandiri. Mubvunzo ndewekuti chii chakarurama kwete kuti zita racho rakakodzerwa nei.
Izvo zvinounzwa mumharidzo inobva kuSinai kana sangano rinokwaniriswa (Sanihedrini) zvinoshanda, uye chimwe chinhu chiri chose kunyange chikaunzwa mutsika hachibvumirwi. Very simple. Hazvisi nyore nguva dzose izvo zvakabva kuSinai kana sangano rakakwaniriswa uye izvo zvisina, asi inhaurirano inoda kuitwa munhau imwe neimwe pazvayo zvayo.
Zvirokwazvo, hapana chiremera kune icho chakasikwa kuburikidza netsika yezvizvarwa. Kwete. Hune huremu hwakati, uye kune mitemo yetsika. ndizvo. Mwari chete kana sangano rinokwanisa rine simba. Nenzira, iyi haisi itsva yangu. Uyu ndiwo mutemo unobvumiranwa nevazhinji vanogadzirisa. Asi pano neapo vanowanzozvifuratira.
Iwe naK. (uyewo rabhi waanonokora mashoko) hamusi kunzwisisa zvandinoreva. Kupokana kwangu ndekwekuti conceptually hapana masimba pamusoro penyaya dzechokwadi. Kana dziri chokwadi, uye hazvina basa kuti zvesainzi here kana kuti kwete (kunyange kuuya kwaMesia kana gadziriro yapachivande ichokwadi) chinogoneka ndechokundipwisa kuti ichi ichokwadi uye kwete kutaura pamusoro pangu chiremera chakabvumikiswa. Nokuti kana ndisina kugutsikana, zvinobatsirei kuti ndiudzwe kuti chimiro chakadaro ndechenhema? ndizvo. Zvakanyanya nyore uye zvakajeka, uye chero munhu asingabvumirani nazvo anongovhiringidzika.
Zvinoita sekuti ndainyatsonzwisisa izvi, saka ndakabvunza
Ini ndichatsanangura zvakadzama, pane sei iwe usati kunyange imwe nhamba yaunowana seyakarurama? Somuenzaniso kurongeka kwemunamato
Hamuvimbi naavo vasina simba here?
Michi Akapindura makore 2 apfuura
Ndakataura nezve chokwadi. Pane nhaurirano yematsi pano
Kana uchitaura chokwadi, unoreva umboo here?
Kureva kuti, unobvuma izvo zvinopihwa seuchapupu, asi usingagamuchire izvo zvinopihwa se "kuzvifungira"?
Ndizvo zvandakanzwisisa zvakadaro
Zvino apa ndanyara
Mharidzo dzese dzevachenjeri kubva mundima hadzisi huchapupu asi "kuzvifunga," sezviri pachena.
Uye kana zvichinzi Chazal isimba, ndiManlan, haisi maonero ega ehunhu hweTorah kubva ipapo kusvika nhasi?
Ndinoti tigumire pano. Unoita kuti zviome iwe usingazive zvazvinoreva.
Kana pane chimwe chinhu chandakanyora uye zvichiita kwauri kuti hausi kunzwisisa, tapota nyora zvakajeka (kusanganisira kwakabva) uye tinogona kukurukura. Ndinobvunza pasina zvirevo zvakawanda nezve nzira yangu kuti zviri pachena kuti hauzvizive.